महांसघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छा निर्वाचित. – Sabaikoaawaj.com
महांसघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छा निर्वाचित.
मङ्लबार, चैत्र २९, २०७३ 10:39:37 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं,२९ चैत/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा विजयी भएका छन् । महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार भएको चुनावबाट गोल्छा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित गोल्छाले प्रतिद्वन्द्वी किशोरकुमार प्रधानलार्इ पराजित गरेका हुन् । गोल्छाले अब भवानी राणापछिको कार्यकायलमा अध्यक्ष हुने पक्का गरेका छन् ।
यसवर्षबाट महासंघको विधान संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने ब्यवस्था राखिएको छ । महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार भएको चुनावबाट गोल्छा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने पक्का जस्तै भएपछि किशोरले प्रतिद्वन्द्वी शेखर गोल्छालाई माला लगाएर जितको लागि बधाइ दिएका थिए ।
जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत समूहको मतगणना सकिनासाथ उनका प्रतिद्वन्द्वी किशोरकुमार श्रेष्ठले गोल्छालाई मतगणनास्थल बाहिर माला लगाएर जितको लागि बधाइ दिएका हुन् । अन्तिम मत परिमाण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
महासंघमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको मतभार ५० प्रतिशत हुन्छ । ९९ वटा वस्तुगत सदस्यको मतभार २० प्रतिशत हुन्छ । ८५६ एशोसिएट सदस्यको मतको हिस्सा ३० प्रतिशत छ ।
जिल्लामा शेखरले ६१ मत प्राप्त गरे भने किशोरले ४२ मत ल्याए। उता वस्तुगतमा किशोरले ५१ मत पाए भने शेखरले ४७ मत पाए ।
वस्तुगततर्फ प्रधानले केही बढी मत ल्याएपनि जिल्ला तथा नगरमा बढी मत ल्याएपछि गोल्छाको जीत निश्चित भएको हो । अब ३० प्रतिशत मतभार रहेको एशोसियटतर्फको गणना सक्न बाँकी छ ।
एशोसियटमा पनि गोल्छाकै राम्रो पकड छ । एशोसियटतर्फ आफ्नो कमजोर उपस्थितिकै कारण किशोरले समूहले यसमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएको थिएन ।
को-को भए उपाध्यक्ष ?
महासंघको चुनावबाट जिल्ला तथा नगरको उपाध्यक्षमा प्रधान समूहका प्रमोद श्रेष्ठले जित हात परेका छन् । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघबाट उनी उम्मेदवार बनेका थिए । प्रमोदले गोल्छा समूहका दिनेश श्रेष्ठलाई पराजित गरेका हुन् ।
त्यसैगरी वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले प्रधान समूहका शंकर प्रसाद पाण्डे र अनुपबहादुर मल्ललाई पराजित गरे । एशोसियटतर्फबाट भने चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्बिरोध उपाध्यक्ष भएका छन् ।
निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा गोल्छा समूहकै बर्चश्व हुने देखिएको छ । महासंघमा गोल्छा समूहको स्पष्ट बुहमत रहने देखिएको छ ।
वस्तुगतमा को-को अाए ?
वस्तुगत र जिल्ला तथा नगर समूहको केन्द्रीय सदस्यमा गोल्छा प्यानलका उम्मेदवार नै बढी विजयी भएका छन् । वस्तुगतर्फ गोल्छाका ११ सदस्य निर्वाचित हुँदा प्रधानका ३ जना आएका छन् ।
वस्तुगततर्फ केन्द्रीय सदस्यमा भएका छन् सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर अञ्जन श्रेष्ठ विजयी। उनले कुल ७३ मत ल्याएका हुन् । उनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक तथा नडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनका अध्यक्ष हुन् ।
वस्तुगततर्फ आकाश अधिकारी, कमला श्रेष्ठ, विनोद ढकाल, शिवप्रसाद घिसिरे, सकुन्तलाल हिराचन, रबिनकुमार श्रेष्ठ, सुनिगोपाल श्रेष्ठ, सन्दीपकुमार अग्रवाल, हेमराज ढकाल, तिलचन्द्र भट्टराई र जयप्रसाद शिवाकोटीले जितेका छन् ।
जिल्ला तथा नगरमा पनि गोल्छा हावी
त्यसैगरी जिल्ला तथा नगरमा पनि गोल्छाकै बहुमत देखिएको छ । जिल्ला/नगरको १८मध्ये १६ केन्द्रीय सदस्य गोल्छा प्यानलबाटै निर्वाचित भएका छन् । २ जना मात्रै प्रधान समूहबाट केन्द्रीय समितिमा आएका छन् ।
जिल्ला तथा नगरतर्फ उमेश डालमियाले सबैभन्दा बढी ८९ मत ल्याएका छन् । सुरकृष्ण वैद्य, राजन श्रेष्ठ, मनिषलाल प्रधान, कृष्णप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, दिपक लम्साल, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, ध्रुवराज श्रेष्ठ भारी, दिलशुन्दर श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, निरक केसी, किशोरकुमार आचार्य, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त अधिकारी र कल्याण जोशीले केन्द्रीय सदस्यमा जित हात पारेका छन् ।
देबकुमार श्रेष्ठ र सुदर्शन कार्कीले समान मत ल्याएकाले एक केन्द्रीय सदस्यमा लागि गोलाप्रथा हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २९, २०७३ 10:39:37 PM